I-Instagram Dictionary ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Matshi 15, 2021 0 IiCententarios 928
Ukuba ungumsebenzisi wokunxibelelana nabanye abantu uya kwazi ukuba amaxesha ngamaxesha kuvela amagama amatsha amabinzana, i-hashtag eyaziwayo kunye nemigaqo yefashoni.
Kungenxa yeso sizathu le isichazi-magama se-Instagram uya kuqonda ukuba ithini intsingiselo nganye ekhankanyiweyo mihla le kweli qonga lilikhulu lezithombe kunye nevidiyo. Ngokuqinisekileyo kuye kwenzeka kuwe ukuba awuqondi kupapasho oluthile okanye isihloko esine-trending, ngoku uya kusombulula onke amathandabuzo akho.
Apha uza kuyifumana isigama esisisiseko se-Instagram, amagama asetyenziswa kakhulu, ii-hashtag zefashoni y zonke Iifilitha ze-instagram Ukucaciswa ngokukodwa.
1 Isigama esisisiseko
2 Yonke iHashtag eyaziwayo kwi-Instagram
3 Ii-hashtag ezidumileyo zefashoni
4 Iifilitha ze-Instagram
Iprofayile yomntu: Esi sisiqinisekiso sakho esinegama lakho, inkcazo emfutshane yebhayiloji kunye nefoto.
Ushicilelo: zonke iifoto kunye nevidiyo oyifaka kwinethiwekhi yoluntu.
abalandeli (Abalandeli): Abasebenzisi abalandela umsebenzi wakho (upapasho) kwaye babone okwenzayo kwinethiwekhi.
Abathinteli: Abasebenzisi abanabalandeli abaninzi abanokuthenjwa okuthile okubangela ukusebenzisana okukhulu kunye nokupapasha kwabo.
Ulandelwe: Abasebenzisi uthatha isigqibo sokulandela ngesizathu esithile.
IiCententariosInxalenye yesicatshulwa esibhala phantsi kwengcaciso yoshicilelo.
azithandayoInkqubo yenkqubo yonxibelelwano ukubonisa umdla wakho okanye ulonwabo lwakho kupapasho.
JongaUmsebenzi wokukhangela okuvumela Fumana abanye abasebenzisi kwi-Instagram (Iiprofayili).
Ithegi yomsebenzisi (@ uphawu): khankanya umsebenzisi kupapasho oluthile. Xa ubhala igama lomntu emva komqondiso walibeka ngqo igama.
#hashtag instagramLuluhlu lwemixholo yokuhlela amaqela ukubonisa umxholo.
Umzekelo, xa ubeka #dog ubonakalisa ukuba ifoto okanye ividiyo yeyelo qela, xa abanye abasebenzisi basebenzisa ithegi efanayo, umxholo uqulathwe kwi-hashtag.
Abasebenzisi banokukhangela ii-hashtag ezithile ukufumana umxholo wayo.
Iifilitha: ngaphandle kwamathandabuzo ngowona msebenzi uthandwayo weqonga, bakhonza baphinde baphinde bahlele iifoto ngaphambi kokuba bazipapashe. Unayo amacebo okucoca nge-23, ukongeza kwizakhelo kunye nezinye iziphumo ezimangalisayo. Ndicacisa zonke iifilitha ze-instagram apha ngezantsi.
Ngqo: Kungumsebenzi ekuvumela ukuba uthumele iifoto ngasese komnye okanye abasebenzisi abaninzi. Kwesi sikhokelo ndicacisa ngokweenkcukacha yintoni i-Instagram ngqo nendlela esetyenziswa ngayo
Yonke iHashtag eyaziwayo kwi-Instagram
Eli gama lidume kakhulu kuba imifanekiso engaphezulu kwesigidi se1 ifakwe le hashtag. Abasebenzisi bayayisebenzisa ukufaka iifayile ezindala ezivela kwixesha elidlulileyo kwaye bahlala besetyenziswa ngoLwesine weveki nganye.
Ibinzana lesiNgesi lithetha Ukuphosa umva kwemini kwaye ikhuthaza ukupapashwa kweefoto zobuntwana, amaxesha embali obuqu nayo yonke into enxulumene nexesha elidlulileyo. Apha ungabona iinkcukacha Ithetha ukuthini i-hashtag #tbt
Le thegi iqala ukusetyenziswa ngakumbi kwaye ibhekisa kumxholo wokupapashwa ngoLwesihlanu. Kufana nokucebisa uLwesihlanu wakho kwabanye okanye isicwangciso esinomdla umntu anike izimvo ngaso.
Yintsingiselo yegama lesiNgesi "Umfazi Crush ngoLwesithathuKwaye isetyenziswa ngoLwesithathu. Abasebenzisi babelana ngeefoto zabasetyhini abazixhamlayo, ukusuka kunina, umzala, umlingisi, imvumi, umakhulu ukuya kwi-heroine enkulu yesikrini.
Ngaphezulu kwe-130 yezigidi zezigidi zezithuba zale tag zithandwa kakhulu kwaye abasebenzisi bayisebenzisa rhoqo. Lithetha "Landela ulandeleKwaye ngokoqobo kuthetha ukuthi "ndilandele kwaye ndikulandele", abasebenzisi be-Intanethi bayayisebenzisa Fumana abalandeli kwi-Instagram ngokukhawuleza kwaye simahla Kwangoko
NgesiNgesi lithetha "Ukuhleka iesile lam ” Uguqulelo oluhlasimlis 'umzimba lube "kukuqhekeza i-eyelet yam" okanye "ukubulawa kukuhleka".
Njengoko unokuqikelela, le thegi isetyenziswa kumxholo ohlekisayo nolonwabo. Uninzi lwezi zipapasho bagqibela ngokuba yintsholongwane, ngenxa yoko abasebenzisi bafaka iithegi kubahlobo babo #LMAO ukubenza bahleke.
Njengoko igama layo libonisa ukuba i-Petstagram isetyenziselwa ukulebhelisha izilwanyana zasekhaya. Yenza uphando kule hashtag eyaziwayo kwaye uya kubona ngaphezulu kwe-27 yezigidi zevidiyo kunye neefoto zeekati, izinja, i-hamster kunye nemivundla.
Eli gama likwabizwa Ukuhlelwa ngokutsha o ipetroli Kuyinto efanayo yokwabelana nge-Facebook okanye ukuphinda ungene kwi-Twitter. Abasebenzisi baphinda baphinde babelane okanye babelane ngomxholo wabanye abantu kwiprofayili yabo, kodwa kuya kufuneka usoloko uthetha ngomlobi kunye nomthombo wokuqala.
Unokufunda ukwenza repost Instagram ngokulula ngezixhobo ezahlukeneyo, nokuba zivela kwi-pc yakho.
Nge-9 yezigidi zokupapashwa kwale hashtag isetyenziselwa ukuthatha ii-selfies ngeeCawa. Abasebenzisi bayazithatha iifoto zabo kwaye bazilayishe ngale tag, nangona namhlanje isetyenzisiwe akukhathaleki nokuba kungeCawa okanye naluphi na usuku lweveki.
KwisiNgesi kuthetha "Ifoto Yomhla" kwaye abasebenzisi bayisebenzisela ukupapasha eyona mifanekiso yabo ilungileyo yemini.
Ayisiyonto ibonakala ngathi, eli gama liguqulela ngokuthi "kukungakhathaleli kunye nokutya ukutya" xa ulibona. Unokude ucinge ukuba loluphi uhlobo lwe-129 yezigidi zeefoto ezenza le ilebhile idumileyo, ndiyakumema ukuba ujonge.
Eli gama linokusebenza okufanayo nokuchazwe ngasentla. #POTD kunye nokuguqulelwa kwayo "Gram lomhla"Olona lupapasho lubalaseleyo losuku.
Ngaphezulu kwe-188 yezigidi zeefoto ezimakishwe kule ntetho isetyenziselwa ukubonakalisa imvakalelo yakho. Abasebenzisi bafaka ividiyo "ebonakalayo" okanye ifoto kunye nenkcazo echaza imeko yabo.
Le hashtag sele ine-135 yezigidi zezithuba, kwaye ngesiNgesi sithetha “Iimpahla zosuku”. Inguqulelo iya kuba “Iingubo zemini” kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiiakhawunti zebhlog, abaphembeleli nabantu abathanda imfashini. Nangona abantu abaninzi beyisebenzisa ukubonisa iimpahla abazinxibayo kunye nezinto zokunxiba / zezinto abazinxibayo. Ikwabizwa Ii-hashtag zefashoni
Le hashtag yadalwa luluntu olukhulu lwama-instagramers agqibe ukuxhasa nokufundisa eyona mifanekiso mihle yezithombe emhlabeni jikelele.
Babesaziwa njenge “Usapho lwehlabathi”Banayo iwebhusayithi yabo, kodwa ngoku ayisebenzi kwaye zonke iindidi zabantu bayayisebenzisa ukufaka ifayile yosuku.
Ilebheli ekhula ngokukhawuleza ngenxa ye-boom kwimisebenzi yokuzivocavoca. Isetyenziselwa ukumakisha izithuba ezivela kubantu kwindawo yokuzivocavoca, ukunciphisa umzimba, imikhwa esempilweni, ukutya okunempilo kunye nantoni na enxulumene nokuqina. Kukho ngaphezulu kwe-45 yezigidi zeefoto ezimakiweyo kwaye iyaqhubeka yanda mihla le.
NgesiNgesi liza kuthi "Shake Intloko yam" kwaye uguqulelo luthetha "ukuphambana" (wanikina intloko yam). Isetyenziselwa xa impapasho iyothusa, ihlekisa okanye into engenakuchazwa.
Ifezekisa umsebenzi ofanayo #F4F kwaye kuthetha "Ngathi"Oko kukuthi, utshintshiselwano lokunxibelelana kwezentlalo ukufumana ukuthandwa ngakumbi kwisithuba sakho. Iyonwabisa kakhulu ngokuthandwa ngabantu abangaphezulu kwe-130 yezigidi zemifanekiso efakiweyo.
El intsingiselo ye-LoL Inokwahluka ngokuxhomekeke kumxholo. Ingaba ngumdlalo weRPG odumileyo (League of Legends) okanye intetho yesiNgesi yokuhleka ngokuvakalayo.
Kuvela intetho yesiNgesi "Indoda Crush NgoMvulo" kwaye iyafana nethegi #wcw kodwa ngamadoda, nangona ukuba ujonga uyakuqonda ukuba iifoto ezininzi zabafazi zilayishwe kunamadoda.
Ezi leta zibhalwe ngesiNgesi "Mnyama naMhlophe" (Emnyama nomhlophe), abasebenzisi ke bafaka iifoto ngeefilitha ezimnyama namhlophe ngokuzicwangcisa ngokwamalebheli.
Ngoku sele kuyimfashini ukulayisha iifoto ngaphandle kweefilitha. Ngale nto, le meko idalwe apho abasebenzisi basebenzisa le hashtag ukuthumela iifoto zabo ngaphandle kokusebenzisa naluphi na uhlobo lokucoca oluzenzekelayo nge-Instagram.
Le hashtag ayidumile (i-240k ifakwe iifoto) kodwa bendifuna ukuyibeka igama. Iindlela "Iprojekthi yeHashtag yempelaveki" kwaye lungumdyarho wokuba i-Instagram ilungiselele ixesha elidlulileyo rhoqo ngeempelaveki apho ameme khona abasebenzisi ukuba bafake iifoto ezintle.
Ukuba ufuna Sebenzisa amabali e-Instagram Ungasebenzisa uninzi lwezi zinto ukwenza iingoma ezifikelela kubasebenzisi abaninzi kwaye zibe nefuthe kubaphulaphuli.
Ii-hashtag ezidumileyo zefashoni
Ngaphandle kweelebheli endizichazile, kukho ezinye eziqhubekayo kwaye ezingayekisi ukukhula, oko kukuthi, azihlali nje njengabanye abathi ziyeke ukusetyenziswa ngokuthe ngcembe.
Ngokwesiqhelo, ezi ntlobo zemigaqo zenziwa ngabantu abadumileyo, abantu abadumileyo, abaneempembelelo ezintle, iibhlog, abasemagunyeni kunye neebranti rhoqo.
Eli gama laqala ukuthandwa kwihlabathi liphela, kwanangaphambi kokuba ibe ngu-Instagram. Ngoku uza kuyazi into ethethayo, thatha umfanekiso ngeselula okanye ithebhulethi ngokwakho. Kwinethiwekhi yezentlalo zingaphezulu kwe-310 yezigidi zabasebenzisi abapapasha ii-selfies zabo.
Ngapha koko, enye yezona zinto zidumileyo ziya kwenzeka kamva, yeyona yenziweyo eyenzeka kwi-Oscar gala ye2014. I-Twitter yayikade yabelwe ngaphezulu kwe-1 isigidi samaxesha emizuzu eyi-50 kuphela emva kokuba yapapashwa.
Njengamaqiniso anomdla wokwazi, igama lonyaka kwi2013 lalikhethwe sisichazi-magama i-Oxford kwaye ukususela ngalo mzuzu iinkampani ezihambisayo zasiphucula isisombululo seekhamera zangaphambili, ukongeza ukubandakanya iiflash kunye nezinto ezininzi.
Eli gama liqale ukuba namandla, kodwa kubonakala ngathi uneengxaki ezininzi kwinethiwekhi yoluntu. Imalunga nokulayisha imifanekiso ye-butt, iibhutsi kunye nokubonisa umva. Abasebenzisi bafaka ezi foto ngamafutshane, iitawuli, iipaneli kunye nasemoyeni.
Omnye wabaqhubi yayinguKim Kardashian kwiifoto zakhe phambi kwesipili esecaleni.
Ijongeka ngathi yimibandela yangaphambili kwaye iqulathe ukuthatha umfanekiso weenwele zakho kunye neenwele. Kwaye kwamkelwe kwisichazi-magama sase-Oxford kunye nabadlali abaninzi kunye nemodeli exhasa kunye nokukhuthaza ushicilelo olunjalo.
Umzekelo, uJessica Alba ungumthandi wokuthatha iifoto zeenwele zakhe, ngoko ke eli gama lifumana ngakumbi ukubaluleka.
Le hashtag isetyenziswa xa uthatha iifoto zeqela, nangona zinokudideka ngokulula kunye #selfie.
Ayidumile, kodwa ikwasetyenziselwa ixesha elifutshane. Abasebenzisi bafaka iifoto zabo banxila, kodwa ngokusengqiqweni abantu abadumileyo abaxhasi le migaqo bagcina beyisebenzisa, ukongeza kwiifoto abanazo.
Wayenodumo, kodwa kancinci kancinci eyekile ukuyisebenzisa, ziifashoni ezidlulayo ze-hashtag. Kuyinyani ukuba ngexesha lehlobo iphinda ibe namandla phakathi kwabasebenzisi.
Imalunga nokufaka imifanekiso kwi-bikini, incinci okanye iphazamise ngakumbi, kodwa ibonisa indawo eyakhiwe phakathi kwe-hip. Ngapha koko, inguqulelo yokoqobo ithi "ibhedi ye-bikini."
Yayinefuthe elibi ukusukela oko inokucebisa ukuthamba komfazi kwaye kungadala i-alamu yentlalo emele umzimba omuhle onxulumene nokulahleka kwesisindo.
Njengoko igama lisitsho njalo malunga nokuthatha imifanekiso kwakamsinya nje uvuka ebhedini, nangona kufuneka babe yendalo kangangoko.
Imvumi uBeyoncé naye unegalelo kwifoto yakhe ethatha inxaxheba kule nto iphinde yaphulukana nokubaluleka kwayo kwi-Instagram.
Uguqulelo lwangempela ngu "Emva kwesenzo" kwaye phezu koko lusekwe, faka iifoto emva kokuba wenze isenzo, nangona uphanda umjelo apho kuvela khona ixesha uya kufumana yonke into.
U-Miley Cyrus naye uthathe inxaxheba kule nto, kodwa iingcali azikukhuthazi ukuyilandela njengoko inokubela ubumfihlo bomntu ngeloxesha uyenza esidlangalaleni.
Ndilibiza eli gama kuba ndilifumana linomdla kakhulu kwaye ngenxa yokuba amagama amatsha atshintshiwe ahambelana nalo mbono. Imalunga nokuxhonywa kwemifanekiso kunye nomoya osemva kuyo nayiphi na imeko, iyasetyenziswa #buttsofinstagram o #cheekyexploits kunye nenjongo enye.
Ezi ntlobo ze-hashtag zefashoni zinokuba yingozi njengoko iintshukumo ezintsha kunye nokuziphatha kubonakala mihla le kunokuthi kudityaniswe kumaqela. Njengoko ubonile kukho okuqhelekileyo kunye nokuhloniphayo kwaye okunokukholisa ngakumbi, ukwahlulwa njengomxholo wabantu abadala.
Nje ukuba ukhethe ifoto ukuba upapashe i-Instagram cebisa iifayile ze-24 (ingahluka kuba zisusa kwaye zibandakanya ezintsha) ukuphinda ziqulunqe iingxelo zakho ngaphambi kokuzishicilela.
Kule vidiyo ungazibona zonke Iifilitha ze-Instagram, nangona ufuna ukwazi iinkangeleko zecebo lokucoca ulwelo ngalunye kunye nokuba yeyiphi imeko esetyenziswayo, funda kuyo:
Unokuba nomdla kwezinye iinkqubo Iifilitha zeefoto ezise-intanethi Ifana kakhulu ne-Instagram enokhetho oluninzi lokubuyisela iifoto zakho
Ezi ziimpawu zecebo lokucoca ngalinye kwi-Instagram:
Ifoto yoqobo ngaphandle kwezihluzi
Ndizakuthatha le foto yesazisi, yile yimifanekiso yantlandlolo ngaphandle kwesixhobo sokusebenzisa. Ndisebenzise esinye sakhiwo kunye nesinye somhlaba enomntu, ukuze ubone ngcono umahluko ngamnye wabo:
Esi sihluzo silungele imizobo kwaye sime ngaphezulu xa imibala ipelile. Inika ithoni emfusa kunye nepinki yokuphucula ithoni yesikhumba ukudala ubomi obuninzi kwimifanekiso yokufota. Ngomahluko ophantsi uthambisa ukungafezeki kwaye kucetyiswa kakhulu ukuba uthathe ii-Selfies.
Ukuba unefoto elincinci emnyama, isihluzo seAmaro silungile ukufaka isicelo. Yongeza ukuvezwa komfanekiso ngokukhanyisa embindini wesithombe kunye nokongeza ithoni ebhulowu, ngokuchaseneyo, ilahlekelwa ngumahluko.
Ingcebiso: ukuba ufuna ukwenza ifoto yesitayile ye-vintage (uhlobo lwekhadi leposi) nayo isebenza kakuhle.
UClarendon ngowona mthombo usetyenziswa ngabo bonke abasebenzisi behlabathi, uyakwazi ukuphucula iifoto zawo nawuphi na umxholo.
Idume kakhulu kuba izisa ukukhanya okukhulu kumfanekiso, iphakamisa izinto eziphambili kunye nokuphucula zonke iitoni eziluhlaza zesithombe kunye namathunzi.
Yizame kwaye uza kubona ukuba kutheni iseyi Ukuhlanjwa kweefayile ze-instagram.
Isihluzo se-cream sisetyenziswa ngakumbi kwiifoto zangaphandle zenza umphumo ofudumeleyo / obandayo owenza ukuba umfanekiso ubethe kwaye ukhrimu.
UGingham uhlamba imibala ngobunono ngokutshintsha ukukhanya kwefoto, ifana nefuthe lokuba sephupheni.
Isihluzi seHefe senza iithoni zegolide kunye nephuzi, nokuba ifoto iphantse ingagxilwe. Ihlala isetyenziselwa ukongeza imibala eqaqambileyo kwiifoto apho kukho khona ukwahluka kombala, umzekelo, echibini, iintyatyambo kunye neendawo zomhlaba ezinezinto ezininzi. Ifana kakhulu nesihluzo se-instagram sesitayile se-Lo-Fi.
Isihluzi se-Hudson songeza ukubanda okuthe kratya kunye nokukhanya okongezelelekileyo kwifoto, siphakamisa umahluko kunye nezithunzi zokufota kwakho. Ukuba uzama ukufaka icebo lokucoca echibini okanye kwiifoto zaselwandle uza kuyibona ukuba iyenza njani impembelelo ebandayo, icy kunye nokuqina komfanekiso.
Isetyenziselwa iifoto zezinto zangoku, ulwakhiwo, iimoto kunye neefoto ezithathwe phesheya.
I-Inkwell sisihluzo somahluko oqinileyo kunye nomnyama nomhlophe. Ingasetyenziselwa iifoto ezinokukhanya okungalunganga kunye nokufihla izithunzi, yenza isiphumo esidala okanye ukuba icebo le-Willow alisebenzi kuwe.
IJuno sisihluzo esisetyenziswa ngokubanzi ngababizi bezonxibelelwano, enyanisweni, sithathwa njengeyona ndawo ithandwayo ye2º emhlabeni. Imodareyitha imibala eluhlaza kunye eluhlaza, iphucula iithoni eziphakathi kunye ezibomvu, kwaye itshintsha ithoni ebandayo ibe luhlaza oluqaqambileyo.
Oko kukuthi, ngatyheli, orenji kunye nemibala ebomvu iyaqina ekufoteni. Isetyenziswe ngokubanzi kokubini kwii-selfies kunye neendawo zomhlaba.
Isihluzi se-lark sifeyinta imibala ebomvu kwaye siphucula imibala eluhlaza kunye neblue ngokongeza ukukhanya. Iluncedo kakhulu kwimihlaba, imilambo kunye namahlathi.
Icebo lokucoca le-Lo-fi lonyusa umahluko kunye nokuhlala, kwaye izithunzi ziya ziqina. Ukulinganisa iikhamera ezisemgangathweni. Ukucetyiswa kakhulu nangasiphi na isithombe sokutya kunye nokutya ngokubanzi.
Isihluzi seLudwig sonyusa ukukhanya kwesithombe kwaye sicime imibala. Kucetyiswa ukuyisebenzisa uyilo, imifanekiso minimalist, imizobo kunye nemilo yejometri.
Isihluzi seNyanga sifana neGingham, kodwa kwinguqulo yayo emnyama namhlophe, isiphumo sokugqibela ngumfanekiso onesibane esimdaka.
Isihluzi seMayfair sinombala opinki kwaye kubonakala ngathi senza isiphumo somfanekiso ngokungathi yiminyaka ye-50. Kubonakala ngokuxolisa liqela le-Instagram.
Isihluzi saseNashville sivelisa ukuthamba okufudumele nokuthandekayo kwiifoto zakho. Inesiqingatha esipinki esipheleleyo esandisa ngakumbi isiphumo. Ungayisebenzisa ukunika ithoni engathandekiyo kunye ne-oldie kwifoto yakho.
I-16- Ehlala ihleli
Isihluzo esingapheliyo sinyusa iitoni eziphuzi, eziluhlaza kunye nezihlaza okwesibhakabhaka, ngokungathi ngumfanekiso ogqibeleleyo. Kuhle ukuyisebenzisa kwiifoto zaphesheya, ukuba uyazama elunxwemeni isiphumo sinokubonakala ngakumbi.
Isihluzi seReyes sifeyinta umbala ngamnye udala ifestile efudumeleyo yokukhanya kunye nesibane esongezelelweyo. Isetyenziselwa ngokubanzi iifoto ze-retro kunye nezakudala.
Isihluzi seRise sinika isibonakaliso kwifoto kunye nokukhanya okuthambileyo embindini, kuthambisa iqela ngalinye kwaye uguqule imibala kwiikhrim kunye neejellows. Kufana nokukhanya komhla wokuqala kubetha ifoto ngokuqaqamba okushushu.
Ihlala isetyenziselwa ukuthambisa ulusu kwaye inike ukuthinta okutsha kwifoto yemihla ngemihla.
Isihluzo esibonayo sidibanisa imifanekiso kancinci ngokongeza izibane embindini kwaye senze i-vignette kwikona nganye. Faka iithoni eziphuzi ukudala umphumo ofudumeleyo kwifoto.
Isetyenziswe ngokubanzi kwiifoto zomhlaba, ngaphandle nangaphandle kunye nokwenza umphumo wokuphumla kunye nokuzola.
Njengoko igama lisitsho (hibernate okanye ulale) isihluzi somthambeka sishiya imibala kwaye sidala ukuba nefuthe. Iya kuba yinto efana nesiphumo sephupha, i-retro okanye i-melancholic.
Isihluzi seValencia sikhanyisela umfanekiso ngemibala efudumeleyo kunye eqaqambileyo. Ezi toni zifudumeleyo zenza ukuba umfanekiso ube ne vintage kunye nefuthe elidala (uhlobo lwe-80 iminyaka), iifoto zibonakala zikhutshiwe, kodwa gcina umgangatho wokuqala.
Ihlala isetyenziswa kwiifoto ezinamathoni e-pastel kunye nemibala eethe-ethe, eqinisekile ukuyiphucula.
Isihluzo se-willow senza ubungakanani bombala ompunga (omnyama nomhlophe) kodwa imibala emnyama ngakumbi njengegrey kwaye imhlophe ngumbala wekhrimu. Isetyenziselwa izithuthi, ifenitshala, ubuso, indalo, ulwakhiwo, imihlaba kunye nesixeko.
Kananjalo iluncedo kakhulu kwi-selfie ephuculweyo ngaphandle kokuba ngumnyama omhlophe nomhlophe, esi sichukumisi sivelisa imibala ngemibala ebonakalayo.
Isihluzi se-X Pro II songeza imibala emininzi kwifoto ukudala ifuthe kwaye linempilo. Kubonakala ngathi iifoto zinhle kwaye ziphilile.
Ingasetyenziswa ngokugqibeleleyo kwizindlu zangaphakathi, zangaphandle, ukuqaqambisa imibala kunye nemifanekiso esemgangathweni.
Njengokuvela kweefiltha ezintsha ze-Instagram, ndiza kuhlaziya kweli candelo.
NgoJanuwari 1, 2021
Ungalibamba njani inani kwiTelegram